ဖူးနုသဈ: ဒဏ်ဍာရီလို ခြိုမွိနျတဲ့ည
အဲဒီနေ့က ကို ZT နဲ့ မတွေ့တာနာတာပဲ..
လမ်းမီးတွေကလဲထိန်လင်း..ည နာရီပြန်တချက်တောင် အဆောင်ကထွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ ....
ဟာာာာာ..... လွှတ်ကြွား နေပါလားးးး
စကားမစပ်... သူ့မှာ လွတ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း ရှိလား။
ဟမ်...... ယောင်လို့နော်..... :PPPP
ယခုကဲ့သို့ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါလို့ လိုရာဆန္ဒပြည့်နိုင်ပါစေ..
ကားလမ်းဘေးက အလှူခံဏ္ဍတ်က အသံမျိုး... :P
အဲဒါနဲ့.. ဟိုဘက်မှာ အောင်ရင်ရဲ့ "ချိန်းတဲ့ည" တို့ ဘာတို့ ဆိုဖြစ်အုံးမှာလား မသိဘူး... ဟိ
ဆက်ရေးပါဦး အချစ်ရဲ့ အကြောင်းလေးတွေ။…
ဘာရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ချစ်သူ
အနော်တိတယ်နော် ကို ဂျက်တီ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်က ခွေးတွေ ဟိုတစ်လောက်တစ်နာရီလောက်ကြးလွှတ်ဟောင်းနေတာ ကိုဇတ်တီ တို့ စုံတွဲလမ်းလျှောက်နေလို့ဖြစ်မယ်
အနော်တိတယ်နော် ကို ဂျက်တီ
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်က ခွေးတွေ ဟိုတစ်လောက တစ်နာရီလောက်ကြာ လွှတ်ဟောင်နေတာ ကိုဇတ်တီ တို့ စုံတွဲလမ်းလျှောက်နေလို့ဖြစ်မယ်
(typo တွေ မနေနိုင်လို့ ဝင်ပြင်ပေးတာ
အဟီး..အရင်တုန်းက စလုံးကို သူလာလည်တဲ့ သမီးရည်းစားဘ၀က အချိန်လေးတွေကို ပြန်လွမ်းသွားတယ်။ ငယ်မူပြန်ပြီး စစ်ကိုင်းလမ်းသီချင်းလေးပြန်နားထောင်လိုက်အုံးမယ်။
အဟား ... မိုက်သဗျာ။
sweet anniversary :)
really touched :D
Dear Ko ZT,
I am sure, you went to one of the university in Thailand. right?
သဘောတကျဖတ်လို့ရီသွားတယ်။ :D :D
(နောင်တရပြီး...မချိတင်ကဲအသံကြီးနှင့်ပြောသွားသည်) :'( :'(
မှတ်ချက်။။ (တော်)၃ တဲ့ ကိုဇက်တီ။ နှစ်ပတ်လည်တခုမှာ မရောက်ရောက်အောင်ကိုအပင်ပန်းခံသွားတာပဲ။
ဆွဲကြိုးအလှူမခံလိုက်ရတာ အနော်ကံဆိုး၏ ;P
အေဘက် ကိုသွားတာမို့လား... မှန်မှန်ပြော။ :P
ဘန်ကောက်တော့ မှန်တယ်။ အေဘက်တော့ မဟုတ်ဘူး။ :D